Horudhac: Arsenal vs Wolverhampton Wanderers… (Gunners oo adkaatay mid ka mid ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League) – Gool FM
(London) 29 Nof 2020. Arsenal ayaa dooneysa inay ku soo celiso ololaheeda Premier League wadada saxda ah marka ay caawa ku soo dhaweynayaan Wolverhampton Wanderers garoonkeeda Emirates.
Gunners ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah shantii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League, waxaana ay kulankan soo galayaan iyagoo ka muuqda kaalinta 14-aad, waxaana hal dhibic ka hooseeya kooxda ka soo horjeeda ee Wolves.
Laacibka kooxda Arsenal ee Bukayo Saka ayaa ka soo kabtay dhaawicii lugta ahaa ee ka soo gaaray Leeds todobaadkii hore.
Pepe ayaa ganaax ku maqan, Willian iyo Thomas Partey shaki ayaa jira mana cadda in Mohamed Elneny iyo Sead Kolasinac ay soo laaban karaan kaddib markii ay laga helay Korona Fayras.
Kabtanka kooxda Wolves ee Conor Coady ayaa diyaar ah, kaddib markii uu seegay barbarihii ay la galeen Southampton, maadaama uu la maqnaa karantiil shakhsi ahaaneed.
Romain Saiss ayaa weli sii maqnaanaya kaddib markii laga helay Korona Fayras.
>- Arsenal ayaa laga badiyay kaliya hal kulan 23-kii kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo dhan oo ay la ciyaareen Wolves.
>- Wolves wax guul ah ma gaarin sagaal kulan oo ay bannaanka kula soo ciyaartay Arsenal tan iyo guushii 3-2 ay ka gaareen bishii Sebtember sanadkii 1979-kii.
>- Si kastaba ha noqotee, mid kasta oo ka mid ah saddexdii kulan ee ugu dambeeyay ee ay booqdeen Emirates wuxuu ku dhammaaday barbaro 1-1 ah, kaliya Manchester City ayaa haatan haysata rikoor dheer oo aan laga badinin kulammada bannaanka ay ku wajaheen Gunners.
>- Arsenal ayaa gool dhalisay 25 kulan oo xiriir ah oo ay wajahday Kooxda Wolves tartammada oo dhan laga soo bilaabo bishii Febraayo sanadkii 1979-kii.
>- Arsenal ayaa laga yaabaa inay khasaaro la kulanto saddex kulan oo isku xigta oo garoonkeeda ah iyagoo aan wax gool ah dhalinin markii ugu horreysay tan iyo afartii kulan ee ay ciyaareen November ilaa December sanadkii 1908.
>- Kooxda Mikel Arteta ayaa leh 13 dhibcood kaddib sagaal kulan, waana dhibcihii ugu hooseeyay ee ay heleen kaddib 10 kulan oo Premier League ah kaddib markii ay 14 dhibcood heleen xilli ciyaareedyadii 1992-93 iyo 1994-95.
>- The Gunners ayaa khasaaro la kulmi karta in ka badan afar kulan 10-keeda kulan ee ugu horreeya xilli ciyaareedka tan iyo 1983-84.
>- Wolves ayaa dooneysa inay guuleysato shan ka mid ah 10-ka kulan ee furitaanka xilli ciyaareed sare markii ugu horreysay tan iyo 1979-80.
>- Waxa ay shabaqooda gool ka ilaashadeen 13 kulan horyaalka Premier League sanadkan 2020, waana ka badan koox kasta oo kale.
>- Kaddib 10 kulan oo ay unbeaten ku ahaayeen kulammada horyaalka Magaalada London, Wolves waxa ay khasaaro la kulantay labadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay caasimadda booqdeen, waxaana laga dhaliyey cel-celis ahaan 6-0.